Arsenal oo kordhisay qandaraaski ay kula jirtay Emirates Airline. - Caasimada Online
Home Warar Arsenal oo kordhisay qandaraaski ay kula jirtay Emirates Airline.
Arsenal oo kordhisay qandaraaski ay kula jirtay Emirates Airline.
Arsenal ayaa xaqiijisay inay kordhisay heshiiskii ay funaanadooda ku xayeysiinayeen magaca shirkda duulimaadka Emirates waxaana lagu kordhiyey shan sano, iyadoo la isku afgartay qarash gaaraya 150 milyan oo ginni.
Waa mid ka mid ah heshiisyadii ugu weynaa ee ceynkan ah waxayna sanadkii Gunners qaadan doontaa 30 milyan ooginni. Marka lagu daro macaga ay funaanada ku xayeysiiyan, iyo garoonka kooxda oo loo aqoonsaday Emirates Stadium ilaa 2028.
Madaxda Arsenal ayaa u riyaaqay heshiiskaan waxayna yiraahdeen sida lagu qoray Website-ka Arsenal: “Heshiiskani waa mid ku haboon Arsenal Football Club iyo taageeraheena dhamaan.